‘ठेकेदारले राजनीति गर्न थालेपछि राजनेताहरुले के ठेक्कापट्टा गर्नुपर्ने हो अब ? « Himal Post | Online News Revolution
‘ठेकेदारले राजनीति गर्न थालेपछि राजनेताहरुले के ठेक्कापट्टा गर्नुपर्ने हो अब ?
प्रकाशित मिति : २०७४, ११ मंसिर १७:५६
चितवन /मंसिर ११ ।
वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलार्इ जिताउने अभियानमा अहिले कलाकारको टोली नै होम्मिएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नेतृत्वको वाम गठबन्धनलार्इ जिताउन नेताहरूसँगै कलाकार पनि देशभरि घुमिरहेका छन् ।